Shiinaha 6061-T651 Soo-saaraha Sheet Aluminium iyo Alaab-qeybiye | Ruiyi
6061-T6 waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loo adeegsado 6000 taxane aluminium ah. 6000 xaashida aluminium ee taxanaha ah ee la bixiyay waxaa ku jira 6061 iyo 6082 taxane. Si gaar ah, xaashida aluminium ee taxanaha ah ee 6061 waa badeecadda wakiilka ka ah taxanahan. Maaddada ugu weyn ee xaashidan aluminiumka ah ee taxanaha ah waxaa ku jira maaddooyinka magnesium iyo silicium. Waxay leedahay astaamaha labada taxane 4000 iyo 5000.
6061 T6 saxan tuman aluminium wuxuu leeyahay iska caabinta daxalka ugu sareysa dhammaan aluminumyada kuleylka lagu daweeyey. Waa daawaha lagu sameeyay silicon iyo magnesium. Waxay leedahay xoog ka hooseeya aluminumyada kale ee isbarbar dhiga, laakiin weli si baaxad leh ayaa loo isticmaalaa. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay iska -caabbinta daxalka iyo qayb ahaan iyada oo ay ugu wacan tahay sifooyinka farsamo ee aadka u wanaagsan. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad ku samaysan karto 6061 aluminum, sida makiinadda iyo alxanka. Qiimaynta mashiinka ee daawahaani waa boqolkiiba 90. Waxa kale oo ay leedahay awoodo ku biirid weyn. Haddii loo baahdo, badeecadani waxay noqon kartaa anodized ama waxaa la mari karaa dahaadho kale.
Codsiyada 6061 aluminiumka aluminiumka ayaa inta badan loo adeegsadaa waxaa ka mid ah taarikada saldhigga, qaybaha baabuurta, qalabka badda, qaybaha badda, qalabka badda, isku xirayaasha korantada, qalabka korontada iyo muraayadaha kaamirada. Kani waa wax yar oo ka mid ah codsiyada baaxadda leh ee daawahaas loo isticmaalo. Waxa kale oo ay leedahay awood loo adeegsado dhismayaasha waajibaadka culus ee u baahan iska-caabbinta daxalka iyo saamiga miisaanka-ilaa-xoogga.
Daaweynta kulul iyo shaqada qabow ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa 6061 alloys. Markaad ku jirto xaalad ka -reebitaan, shaqo qabow si fudud ayaa loo samayn karaa, iyadoo la abuurayo badeecad dhammaad ah oo la gooyey, shaabadeeyey, la qoday, si qoto dheer loo sawiray, laaban ama loo taabtay. Kuwaas oo dhan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la adeegsanayo hababka shaqada qabow ee caadiga ah.
Marka kuleylka daaweynaya daawahaan, kululeyn buuxda waa in lagu sameeyaa 990 digrii F, ka dibna biyo la demiyo. Adkaynta roobka, biraha waa in lagu dhejiyaa 320 darajo F ilaa 18 saacadood, hawo la qaboojiyaa, kadibna lagu meeleeyaa 350 darajo F illaa siddeed saacadood, ka dibna hawo mar kale la qaboojiyaa.
6000 Tilmaamaha Sheet Aluminium
Lo Daawaha: 6061 6063 6082 6A02 iwm.
Ick Dhumucdiis: 0.2-150mm
♦ Dhumuc (mm): 0.6-5.0mm
Ballaca (mm): 100-1800mm
♦ Shahaadada: ISO9001, MSDS, SGS
6061-T651 Sheet Aluminium – (ASTM B209, QQ-A-250/11) Waxay bixisaa isku-darka xoogga korodhay, iska-caabbinta daxalka, iyo farsamaynta taasoo ka dhigaysa darajada aluminium ee sida weyn loo isticmaalo. 6061 Sheet Aluminium waa kuleyl la daaweyn karo, waxay ka hortagtaa dildilaaca walaaca awgii, way fududahay in alxanka iyo mashiinka la isticmaalo, laakiin waxay ku kooban tahay qaabaynta. 6061 Sheet Aluminiumku wuxuu ku habboon yahay qaabaynta qaabdhismeedka, taarikada saldhigga, gussetts, mootada & qaybaha baabuurta, iwm Dhamaadka Milliga - Aan La Cadayn
Aan magnetic ahayn, Brinell = 95, Tensile = 45,000, Soo saar = 40,000 (+/-)
Qiyaasaha Hantida ee La Heli Karo: 1ft x 1ft, 1ft x 2ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft or Cut to Size ama Qaabka Custom.
Tilmaamaha 6000 Sheet Aluminum Aluminum
Waa nooc ka mid ah xaashida aluminiumka oo lagu been abuuri karo daweyn qabow. Tan, waxaa loo adeegsan karaa xaaladaha leh baahida sare ee ka-hortagga daxalka iyo oksaydhka.
Availability Iyada oo ay ugu wacan tahay helitaankiisa wanaagsan iyo isku -xiraha leh astaamaha super, si fudud ayaa loo dahaadhaa oo wuxuu leeyahay hab -socod wanaagsan.
♦ Ku habboon in la sii farsameeyo darbiga dahaarka iyo derbiga daahyada
Codsiyada 6000 Taxanaha Aluminium
Sheet Xaashidan aluminiumka ah ee taxanaha ah waxaa loo adeegsan karaa in lagu farsameeyo qaybaha diyaaradda, qaybaha kaamerada, lammaaneyaasha, qaybaha markabka, qalabka, qalabka elektiroonigga ah iyo kala -goysyada, valves -ka iyo qaybaha waalka, iwm.
Waxaan sidoo kale bixinnaa xaashida aluminium, gariiradda aluminium ee aluminium, 5 bar saxan aluminium ah, xargaha aluminium, gariiradda aluminium anodizing, saxan tuman aluminium dheemanka, gariiradda aluminium, iyo inbadan. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah badeecadahayaga, fadlan xor u noqo inaad nagala soo xiriirto lambarka taleefanka ama emaylka lagu siiyay mareegahayaga.
Anagoo ah soo-saare xaashida aluminium-ka iyo alaab-qeybiye 6061-ku-saleysan Shiinaha, waxaan sidoo kale soo saarnaa gariiradda aluminiumka dahaarka leh, saxanka aluminium, gariiradda aluminium, xargaha aluminium, xaashida aluminiumka anodizing, xaashida aluminiumka, iwm. xor ayaad u tahay inaad toos noola soo xiriirto
Hore: 3003 5052 Aluminum Diamond Tread Plate
Xiga: Iftiimin 1100 1050 3003 Aluminium Plate Checkered 3 Bar 5 bar Muraayad Sheet Aluminum Alxan